Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo "la dilay" [Magaca]
KISMAAYO, Soomaaliya - Sarkaal sare oo kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolada Jubooyinka ayaa lagu dilay howlgal ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa Ajnabi ah, sida uu sheegay Taliska ciidanka xoogga dalka.
Taliyaha Guutada 58-aad Ururka 11-aad, ee Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Gaashaanle Dhaxe, Cabdi Yare, ayaa daboolka ka qaaday in Shaqsiga ay dileen lagu magacaabi jiray "Aruuriyoow."
Wuxuu Taliyaha intaas ku daray in howlgalka ay ku khaarijiyeen Aruuriyoow, uu ka dhacay deegaannka Araare oo ku dhow degmada Jamaame oo 66-KM ku jirta magaalada Kismaayo, ee caasimadda KMG ah ee Jubbaland.
"Howlgalkaan waxaa nagala qeyb qaatay ciidamo Mareykan ah, naga gacan siiyay dilka Aruuriyoow, oo ahaa sarkaal sare oo u qaabilsanaa dhanka cashuur qaadista," ayuu yiri Taliye Cabdi Yare.
Marka laga soo tago sheegashadda Taliska ciidamada xooga dalka Soomaaliya ma aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya inay khaarijiyeen sarkaalkaan Al Shabaab kamid ahaa, mana jiraan illo madax-banaan oo xaqiijinaya.
Sidaasi si lamid ah, Al-Shabaab wali dhankooda wax war ah kama aysan soo saarin warka kasoo baxay Taliska ciidanka xooga oo ah in laga dilay sarkaal dhanka lacag qaadista u qaabilsanaa.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa Ajnabi ah oo Mareykan iyo AMISOM ah, ayaa maalmihii dambe sare u qaaday howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab-ka ku sugan duleedka Kismaayo.
Magacaabista ayaa kusoo beegantay xilli Madaxweyne Axmed Madoobe uu booqday degmada.
Xubno ay Al-Shabaab tababar u soo xireysay oo la duqeeyay
Soomaliya 30.07.2019. 15:27
Ciidamo Mareykan ah oo lagu weeraray Jubada Dhexe [Fahfaahin]
Soomaliya 19.08.2018. 10:10
Shirka Dastuurka oo Muqdisho ka furmay xilli Jubbaland qaadacdey
Soomaliya 13.05.2018. 11:02
Dalal shisheeye oo lagu eedeeyay farogelinta doorashadda Jubbaland
Soomaliya 19.08.2019. 13:27
Wasiiro heer maamul ah oo lagu "aflagaadeeyey" garoonka Muqdisho
Soomaliya 12.06.2019. 13:18
Rooble oo soo dhisay xukuumaddii 20aad ee Soomaaliya 19.10.2020. 21:49
Madaxii Jabhada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose oo "la dilay" 19.10.2020. 18:00
Laftagareen oo ka hadlay doorashooyinka soo aadan ee Soomaaliya 19.10.2020. 16:53
Qidadda DF ay 'soo miin-guurisey ee xasilin weyday' Muqdisho 19.10.2020. 11:37
Kenya oo ku hungowday lacag ay fileysay in ay ku hesho magaca AMISOM 19.10.2020. 06:56
Villa Soomaaliya oo dhiiragelineysa burburka heshiiska doorashada 2020-21 19.10.2020. 00:47